काठमाडौ । संसारमा हरेक मानिस धनी बन्न चाहन्छ । यसका लागि उनी दिनरात मिहिनेत गर्छन् । यद्यपि, सबैले समान परिणाम प्राप्त गर्दैनन्। कोही धेरै मिहिनेत गरेर पनि गरिब रहन्छन् र कोही थोरै परिश्रम गरेर पनि धेरै पैसा कमाउँछन् र पैसाको कुनै कमी हुँदैन। ज्योतिष शास्त्रमा कुण्डलीमा रहेका केही यस्ता योगको बारेमा बताईएको छ, जसबाट व्यक्ति धनी बन्ने वा नबन्ने तय हुन्छ । वा उनीहरुको लागि कुन व्यवसाय शुभ छ, जसमा उनीहरुले मिहिनेत गरेर धेरै पैसा कमाउन सक्छन् । ज्योतिषी डा अरविन्द मिश्राबाट जानौं राशिफलमा रहेका यी योगहरूबारे।।।
मेष : मेष राशिका व्यक्तिहरूका लागि शुक्र ग्रहमा हुँदा धनी व्यापारी आदिको योग बन्ने गर्दछ। धनको घरमा मंगल र शनिको संयोगले भूमि र कृषि कार्यले धनी बनाउँछ।
वृष : शुक्र ग्रह बुध र बृहस्पतिको घरमा हुँदा, यि राशिवालाहरुले व्यापार लेखकको व्यापारबाट धेरै धन आर्जन गर्दछ। अर्थात् यी काम गर्नाले यस राशिका व्यक्तिले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छन् ।
मिथुन : धनको घरमा चन्द्रमा र बृहस्पति प्रतिगामी मंगलको साथमा हुँदा धनी बन्ने सम्भावना बढ्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले कारखाना, उच्च प्रशासनिक अधिकृत र विशेष धार्मिक संस्थाको पदाधिकारीको रूपमा काम गर्दा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्।
कर्कट : शुक्रमा सूर्य र बृहस्पतिको उपस्थिति हुँदा प्रतिष्ठाको धनी व्यक्तिमा धनको कमी हुँदैन। यस राशिका व्यक्तिहरूले पानी र गिलाससँग सम्बन्धित व्यापारमा ठूलो सफलता कमाउन सक्छन्।
सिंह : बुध र बृहस्पति शुक्र र धन गृहमा छन् भने, व्यक्ति एक विद्वान र उच्च स्तरको व्यापारी हो। यस राशिका मानिसहरु कपास, कागज र स्टेशनरीको व्यापारमा सफल हुन्छन्।
कन्या : शुक्र र धन गृहमा चन्द्रमा र बुधको संयोजनले महाधनी योग बनाउँछ। यस राशिका व्यक्तिहरूले अध्यापन, कम्प्युटर आदि व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी गर्न सक्छन्।
तुला : शुक्र र सूर्य र बलवान मंगल स्थित हुँदा होटल, रेष्टुरेन्ट र मेसिनरी काम जस्ता अग्निजन्य कार्यबाट विशेष धनी योग बन्ने गर्दछ।
वृश्चिक : शुक्र र धन गृहमा बृहस्पति हुनुले विशेष धनी योग मिल्नेछ। यस राशिका मानिसका लागि निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम शुभ मानिन्छ ।
धनु स् शुक्र र धन गृहमा शनि र मंगलको संयोगले उच्च स्तरको जग्गाधनी र मेसिनरी व्यवसाय वा कृषि कार्यको विशिष्ट काम गर्ने व्यक्ति हुन्।
मकर : मकर राशिमा शुक्र र धन गृहमा शनि र मंगलको संयोगले कृषि फार्म, सम्पत्ति वा कारखाना आदि जस्ता मेसिनरी कामबाट पनि विशेष लाभ मिल्छ।
कुम्भ : कुंभ राशिमा शुक्र र धन गृहमा बृहस्पतिले महाधनी योग बनाउँछ। यस राशिका व्यक्तिहरुका लागि मेकानिकी, बीमा र करार आदि क्षेत्रमा सफलता मिल्ने आशा छ।
मीन : मीन राशीमा शुक्रको स्थिति र धन गृहमा सूर्य र मंगलको स्थितिले अग्नि सम्बन्धी काम वा मेसिनरीको व्यापारमा धेरै लाभ दिन्छ। यसमा मंगल ग्रह हुनुहुँदैन।
२०७८ माघ ९, आईतवार १०:५३0Minutes 118 Views
करिब डेढ करोड भन्दा बढी लगानीमा शंख पार्क
केही देख्नुभयो ? यदि देख्नु भयो भने ओम लेखी शेयर गर्नुहोस् धन लाभ हुनेछ ! एक पटक अबश्य पढ्नुहोला !
३० वर्षपछि शनि स्वयम् फर्कदै, यी ५ राशिले सावधानी अपनाउनुहोला